Ubuhle kunye nempilo Cosmetics
Ukuze ulondoloze ubuhle besikhumba sakhe, ibhinqa mayiqale ngokunyamekela. Abantu abaninzi bathatha iminyaka engaphezu komnye ukufumana imali efanelekileyo.
Iigels ezivela kwintsimbi ebusweni
Ukubonakala kwe-acne kunye ne-acne ebusweni yisifo esifanele siphathwe. Le ngxaki ingavela nanini na ubudala, kuxhomekeke kwindlela yokuphila, ukutya okunomsoco, iimeko eziphilayo kunye neemeko ezixinzelelekileyo ezenzeka ebomini.
Ukunyanga intonga engcono ngale ndlela:
I-Mirra i-gel ngesiliva-ngokubulela kwiincinci zesiliva, inika isandla ekuqhelweni kwe-microflora yesikhumba kwaye iyomeleza umkhuhlane wayo, inomphumela wokulwa ne-antimicrobial ebusweni kwaye ilawula ukutshintshwa kweeseli ze-epidermal. Sebenzisa ii-2 ngeentsuku kuphela kwiinkalo zengxaki zesikhumba.
I-Gel Eveline I-SOS Ulawulo oluchanekileyo-lisetyenzisiweyo kwinqanaba-nge-inqaku ukuba lingagqithisi ubuso bonke. Iqukethe i-zinc, ibulela kule nto kwaye ilwa nenkqubo yokuvuvukala, iphilisa ngesikhumba ebusweni, iyanciphisa ubomvu nokucaphukisa.
I-Matirujushchie i-cream-gels ebusweni
I-gel-gel iyadingeka kubasetyhini abafuna ukunyamezela, ukugcoba kunye nokubukeka komzimba, kodwa ukukhethwa kwesi sixhobo kufuneka kuhanjiswe ngokucophelela ukuze kugweme iziphumo ezingafunekiyo ngendlela ye-acne ne-rash. Nazi ezinye zazo:
I-gel-gel yongcolisa i-aloe juice kunye ne-calendula evela kwinkampani yase-Mirra-iqukethe iivithamini eziphucula kakuhle, ukwandisa u-elasticity kunye nokunciphisa isikhumba, ukuphelisa ukukhanya.
I-gel-cream gel for Face Clarins Daily Energizer Cream-Gel - iqukethe ifom entsha entsha esekelwe kwizicatshulwa zezityalo, ngokunyanzela ukunyusa ulusu, inqanda ukubonakala kwe-sheen e-greasy, inika isikhumba ukukhanya okukhulu.
Iibelesi zokuhlamba ubuso
Kubaluleke kakhulu ukukhetha i-gel efanelekileyo yokuhlamba ubuso, i-tk. Ngelo xesha, kungekhona nje into efunekayo ihlanjiswa kwesikhumba, kodwa kwakhona iibhaktheriya eziyimfuneko kunye nezilwanyana ezincinci, ngaloo ndlela zenza kube nzima. Ngako oko, esi sixhobo akufanele sihlambulule kuphela isikhumba, kodwa size siyikhusele.
I-Cosmetologists iyacetyiswa ukuba ikhethe:
I-Surgery ye-Uriage Surgras yenzelwe ulusu olubucayi nolunengxaki. I-gel iqukethe amanzi ashushu (malunga ne-30%), ikhupha isikhumba ngamagunya anokunyusa, ngenxa yoko kuba iphilile, ihlambulukile, ihlanjululwa, ihlambulukile kwaye ilula.
Ukuhlamba i-gel uMary Kay Taymvayz - ithuluzi elihle lokuhlamba, elikhupha isikhumba, lihlambulule kwaye lihlaziye. Kufuneka kuqatshelwe ukuba esi sixhobo sinoqoqosho.
Ukucoca amaGel ebusweni
Kwabo bafuna ukuhlambulula ngokukhawuleza, ukuhlaziywa nokuphucula isikhumba sabo, izixhobo ezinjalo ziye zaphuhliswa:
Ukuhlanjululwa kweeFastile kuqukethe iiVithamini A kunye no-E, ezifanelekileyo zonke iintlobo zesikhumba, zivimbela ukukhulelwa kancinci kwesikhumba kwaye zinefuthe eliqabulayo.
Ukucoca i-gel kunye nezicatshulwa ze-celandine kunye ne-yarrow eqinileyo i-Mirra-iqulethe izicatshulwa ze-nettle, i-celandine kunye ne-millennia, iivithamini E kunye ne-F, ioli efunekayo ye-lavender evumela ulusu ukuba lunakekelwe unyango, luphucule umbala wesikhumba, kunye ne-matiruet kwaye luyihlaziye.
Ubuso obushukumisayo beGel
Kusuka kweli qela lemali linokuqatshelwa:
I-biotherm enamandla yokunyusa i-gel I-Aquasource - ekubunjweni kwayo kukho amanzi ashushu, i-antioxidants, amaminerali kunye namavithamini, ivumela ukukhusela i-epithelium kuzo zonke iintlobo zokuvuvukala, ukucaphuka, ukuma nokuguga.
I-Uriage Aqua Precis yi-hypoallergenic, i-agent enokuphucula kunye ne-matting agent, echithwe kakuhle.
Ipelomeome gel ebusweni
Ukubuyisela nokuphucula isikhumba sombuso, i-Bio Performance Liposome gel ngumncedisi obalulekileyo. Ukubunjwa kwalo kubandakanya amaminerali olwandle olufileyo, i-alo, i-lecithin, eyenza ulusu lukhulu ngakumbi kwaye luqinisekisa ukuveliswa kwawo, luphelise amabala e-pigment.
Ukujongana nokukhangela i-gel
Kakade ke, ungayikhohlwa ngenye yeenkqubo ezibaluleke kakhulu zokuhlanjulisa ubuso. Ngendlela efanelekileyo kakhulu yokuhlambulula ubuso, ungasebenzisa i-gel ye-peeling ebusweni be-Organic Planet. Iqulethwe yimimandla yemvelaphi yemvelo, eyenza i-ejenti isebenzi enamandla yezinto eziphilayo. Oku kukuvumela ukuba unamathele kwaye uphinde uvuselele isikhumba ebusweni, unike amandla okuphefumula, fumana ukutya okunzulu kunye ne-hydration.
Iifake ze-photo shoot
I-Acne ebusweni - indlela yokukrazula
Indlela yokususa i-acne
I-Serum isekelwe kwiziqhamo ze-acid
Ukuchaneka ngokufanelekileyo ukusebenzisa isicelo sokufihla ubuso?
Igrama yesikhumba seoli
Indlela yokwenza iimpepha?
Yintoni omele uyidle ngabafazi abakhulelweyo?
U-Taylor Swift uyona nkwenkwezi yomculo ohlawulelwayo
Ukulungiswa kwendawo yokuhlala kwindlu yepaneli
Iintlobo ze-70 zeNwele
Indlela yokufunda ukukhwela ibhayisikili ngokukhawuleza kwaye kulula?
I-Lavender - ukutyala nokunyamekela
Drywall okanye iplasta?
Cottage ushizi casserole ngaphandle kwamaqanda
Ukuqhawuka kwesisu ngesonto elikhulelwe
UWoody Allen waphawula ngesityholo kunye noHarvey Weinstein: "Kuyadabuka"
Isigubhu esisisiseko ekwindla ka-2013
Umyezo waseGrabera - ukutyala nokunyamekela
U mncinci u-Erica Herceg?
Isitayela sikaKate Moss
29 imifanekiso ephosa kwi-roller coaster
Uthayibhile ngemisebenzi yangaphandle - iimpawu zeepapa ezidayisayo
Ziziphi iebhatyi zisefesini ekwindla ngo-2016?